I-Helical worm gear motor sew, gearical worm vs worm gear, gearical worm gearbox, ukuthena amagiya angama-helical gear, i-helical drive gear, i-helical gear pump, sew gear motor, cutter gear gear, giya helical gear
S uchungechunge helical worm igiya motor thunga uhlobo. Amagiya okunciphisa izimpethu angena ochungechungeni olubili, ngezinguqulo XA nge-shaft ne-XF-XC ngezinhlinzeko ezikhuphukayo zezimoto.
I-helical gear worm gear motor yamukela imodi yokuxhuma eqondile yemoto, futhi isakhiwo siyisiteji sokuqala segiya lendawo kanye nesigaba sokuqala sokuhanjiswa segiya. Ukuphuma kufakwe shaft futhi kuza ngezitayela eziyisithupha eziyisisekelo zokufaka. Ingabuyiselwa emuva futhi ibuyiselwe emuva. Igiya lomthambo lamukela indawo yezinyo elukhuni, ukusebenza okuzinzile, umthamo omkhulu wokuthwala, izinga lokushisa lemvelo elisebenzayo -10 ° C ~ 40 ° C. Lo mkhiqizo unezici zobubanzi obukhulu bokuhlukahluka kwesivinini, isakhiwo esihlanganisiwe nokufakwa okulula ngokuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo.
Ama-motors wamagiya we-inline ne-bevel, ama-motor shaft ahambisanayo we-shaft, namabhokisi wamagiya wesibungu ane-AC motor. Ububanzi bakhiwe nge-aluminium noma nge-iron castings, futhi buhlanganisa ama-torque, ne-Helical worm-geared motor version entsha yesitayela, i-gear motor size ingenziwa ku-n2 = 22.8 rpm 1 hp, 230 / 400V 50Hz side side 5 efficiency class IE2, Ngemiyalo yokusebenza, sicela uxhumane nathi.
I-S uchungechunge lwe-gear worm gear uchungechunge (isilinganiso esikhulu sesivinini),
1. S uchungechunge lokunciphisa lunokuqukethwe okuphezulu kobuchwepheshe, futhi inenhlanganisela yamagiya anamandla kanye namagiya worm ukuthuthukisa i-torque nokusebenza kahle komshini. Lolu chungechunge lwemikhiqizo lunokucaciswa okuphelele, ububanzi bejubane elikhulu, ukusebenza okuhle, ukuzivumelanisa nezindlela ezahlukahlukene zokufaka, ukusebenza, ukuphepha nokwethenjwa, impilo ende yenkonzo, kanye nokwenza imigomo yamazwe aphesheya.
2. Ingaphezulu lomzimba linama-concave ne-convex ukushisa ukushisa, ukumuncwa kokuqina kokudlidliza, ukukhuphuka kwezinga lokushisa okuphansi nomsindo ophansi.
3. Umshini unokubopha okuhle kokufaka uphawu nokuzivumelanisa nezimo okuqinile nendawo esebenza kuyo.
4. S uchungechunge lwe-helical gear wormcuter we-S uchungechunge olunamandla okudlulisela okuphezulu, ikakhulukazi ilungele izikhathi eziqala njalo. Ingaxhunyaniswa ngejubane ehlukahlukene yokunciphisa isivinini futhi ifakwe izinhlobo ezahlukahlukene ze-motor drive. Ingafakwa ku-90 degree transmit operation.
I-5, S helical gear reducer 20CrMnTi impahla, futhi ngemuva kokuqothula futhi kuqeda ukwelashwa kokushisa, ubulukhuni bangaphezulu bungafinyelela ku-58-62HRC, ukucubungula amazinyo okugaya, ukunemba kungaba grey 5-6, ngokulungiswa okuphezulu kokucaca, ukuhambisa okuqinile, ivolumu encane Izici ezinjengomthamo ophezulu nempilo ende.
6. Injini yama-helical gear motor ingafakelwa izinhlobo ezahlukahlukene zemoto ukwenza ukuhlanganiswa kwe-elekthronikhi, okuqinisekisa ngokuphelele izici zekhwalithi zemikhiqizo.
1. Inhlanganisela yegiya le-helical gear kanye ne-worm gear ine-compact isakhiwo kanye nesilinganiso sokunciphisa esikhulu.
4. Ukusebenza okumaphakathi: isilinganiso sokunciphisa singu-77% ngo-7.5-69.39; I-62% ka-70.43-288; no-57% wokuhlanganiswa kwe-S / R.
Isilinganiso sobubanzi besivinini: uhlobo oluyisisekelo 9.96 ~ 244.74, S uchungechunge / uhlobo lokuhlanganiswa lwe-S lungafinyelela ku-8608
Ububanzi beTorque: 43 ~ 4200 Nm
Ibanga lamandla: 0.18 ~ 22 kW
Uhlobo lwe-SF shaft olwandisiwe oluhlanganisiwe lwe-SF-shaft, ukufakwa kwe-flange
I-S ... S- ikhombisa ukuxhumana kwe-axis kwe-eksisi ekhuphuka nge-axis
SAF-shaft ifakwe, iflange ebekwe SAT-shaft ngengalo ye-torsion
Lolu chungechunge lwama-minimers lufana ngesimo kuma-K-Series ancishisi futhi lungasetshenziswa ngokushintshana. Kodwa-ke, ngaphansi kwamandla afanayo nenombolo yohlaka, uchungechunge lwe-S lungafinyelela ukwanda kwesilinganiso sokujula okungaphezulu kwesivinini.
Izinhlobo eziphambili ze-S uchungechunge lwe-gear helical gear-worm ehlisa yilezi:
Lapho usebenzisa umqondo wethu we-modular futhi uhlanganisa amayunithi we-helical worm weyunithi ye-S ne-AC motor ukuze ube yi-helical-worm gearmotor, noma ne-servomotor. Ngokufanayo nama-mors wezinye izimoto ze-China S Series Helical Worm, isivinini sejubane, kepha ungathola imininingwane eminingi ngomkhiqizi wezimoto ze-China Worm, uhlobo lwangaphambilini lwegiya yemoto kanye nemikhiqizo yezimoto ezifakiwe kumakhasimende ethu njenge-simenti plant , isitshalo sokwelashwa ngamanzi, isitshalo sokucindezela uwoyela njll. kanye nayo yonke i-helical-worm gear motor iyisisekelo sokushayela esinomsindo ophansi. Okwethu Ingasetshenziswa kabanzi metallurgy, ezimayini, ekuphakamiseni, embonini ukukhanya, amakhemikhali, ezokuhamba, ukwakhiwa kanye neminye imishini umshini wokunciphisa ijubane.
Imboni ye-1.Chemical nokuvikelwa kwemvelo
3.Building kanye nokwakha
Imishini yokuwasha iCar
I-Taiwan S series HELICAL WORM gear motores, ikhwalithi ephezulu kepha ibiza kakhulu kunezethu futhi lapha ungathola imininingwane ngochungechunge lwethu lwe-S HELICAL WORM gear motor iyafana kodwa intengo yokuncintisana kakhulu. Thina, abakwaSogears abaziwayo baqala ngonyaka we-1993 - Umhlinzeki, uMhwebi noMthumeli kwelinye izwe osezingeni eliphakeme le-Helical Worm gearbo. Njengomkhiqizi wezimoto ohlosiwe, amaSogears abuye akhiqize ama-motor wama-gear we-K / F / R ochungechunge owenzelwe ngokufana nemikhiqizo ye-SEW '. Sinikeza wonke ama-SEW Eurodrive standard Helical Gear Motors, MOVITRAC, Helical Bevel Gear Motors, Helical Worm Gear Motors, Parallel Shaft Helical Gearmotors. Ifektri yethu iphinde inikeze ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso nezisetshenziswayo. Zizwe ukhululekile ukuthenga intengo yesaphulelo i-helical worm gear motores S uchungechunge olwenziwe eChina esitokweni lapha kusuka embonini yethu.
Isimbi yensimbi / Ductile iron
I-40CrMo iron alloy
Isikhashana sukuma (MAX)
Ukuthwala kwekhwalithi ephezulu yaseChina, i-HRB / LYC / ZWZ / C & U. Noma eminye imikhiqizo iceliwe, i-SKF, FAG, INA, NSK.
1.1 Sinikeza iwaranti yezinyanga eziyi-15. Singochwepheshe wakho wamagiya ezikelemu ezinesigaba esisodwa nezinezigaba eziningi. Singumlingani wakho kunkampani enkulu yemishini namaphrojekthi emhlabeni wonke. Thayipha kusuka nge-motor flange nokuhlangana kwezimoto zama-IEC motors ukuze kusheft shaft kuphela.
1.2. Sinezinkulungwane zamagiya wezimoto zamagiya. Kusuka ku-Input Power 0.06KW kuye ku-200KW, i-Ratio 1.3-289.74, isivinini sokukhipha i-0-1095rpm ne-Output torque 1.4-62800Nm. Bangakwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho zonke ezahlukahlukene zezimboni ezahlukahlukene. I-helical worm drive ilungiselelo lamagiya okuhamba lapho i-worm meshes enegiya lesibungu, Le motor ene-helical worm drive system ivame ukusetshenziselwa amathoyizi nolunye uhlelo oluncane. Igiya lesandla sokudla noma isibungu sesandla sokudla ngesinye lapho amazinyo asonteka khona.
1.3. Sinikeza ikhathalogi ye-E-noma i-Paperalog, ukuze ukhethe imodeli kalula ngokuya ngezidingo zakho
1.4.Umukelekile ukuthi uvakashele ifektri yethu ukubheka imikhiqizo yethu, singakusiza ukuba ubhukhe nehhotela noma ithikithi
Sasikhethekile ekunciphiseni ukuhanjiswa kwamagiya ngaphezulu kweminyaka engama-20! Abakhiqizi bezimoto abahamba phambili abangama-5 abaziwa kakhulu eChina Amandla Wokukhiqiza: amasethi angaphezu kwesigamu sesigidi semoto yejubane ngonyaka.
Le nkampani inamandla amakhulu ezobuchwepheshe. Inabasebenzi abangaphezu kwama-400 njengamanje, okubandakanya ochwepheshe abangaphezu kwama-40 bezobunjiniyela nochwepheshe abayi-10 nonjiniyela abaphezulu abajabulela izibonelelo ezikhethekile zoMkhandlu Wezwe. Sikhiqiza amabhokisi wamabhokisi we-Helical Worm, ama-Bevel Gearboxes, i-Helical Gear Box, futhi futhi siyi-Siemens Authorized Distributor, Supplier, Dealer kuzo zombili iChina neNdiya.
2.3. Izitifiketi Zethu:
Kupasiswe "Isitifiketi se-ISO 9001 International Quality System", "International Quality Credit AAA ++ Ceritifacte", "iSitifiketi seSwitzerland SGS", i-Iconic Brand eChina Chinese Electromechanical Industry "," nokunye.
Q: Hlobo luni lwe-gear motor ongasenzela lona?
A: Imikhiqizo eyinhloko yenkampani yethu: i-JWB-X yochungechunge lokuhambisa okuqhubekayo okuguquguqukayo, i-RV uchungechunge lwegiya lesithuthuthu, i-B / JXJ cycloidal pin gear gear gear motor, i-NCJ series gear motor, ne-R, FK, S series helical-tooth gear motor (kufana ne-SEW), amamodeli angaphezu kwekhulu nezinkulungwane zokucaciswa.
Q: Yini ukusetshenziswa kwegiya lamagiya?
A: Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ku-ceramic, ingilazi, ukudla, ukusansimbi, ubhiya nesiphuzo, ukuphrinta nokudaya, indwangu, ubunjiniyela be-petrochemical, indawo yokugcina impahla, umshini osebenza ngokhuni, imishini yokuvikela imvelo, ukuphrinta nokupakisha, ikhemisi nesikhumba. Imikhiqizo ithengiswa kwamanye amazwe nasezifundeni, ezinjengeYurophu, iMelika, kanye neNingizimu-mpumalanga ye-Asia, futhi inabaningi abasabalalisi nabathengisi bezinsizakalo ngemuva kokuthengisa.
Q: Yini impahla oyisebenzisayo?
I-A1: Umzimba we-Aluminium Housing (Okwe-RV series motor worm motor Usayizi 30 ~ 90) Helical worm gear motors zuza i-torque ephezulu ngejubane eliphansi nangamanani akhokhelekayo. Baqoqwe ngamagiya anama-helical ne-worm. Ngonhlokweni wegesi lomsundu we-helical worm, kuyigiya lesibungu elinentengo enengqondo kakhulu. Amagiya ezikelemu ngosayizi SB025 - SB090 enziwa nge-aluminium kanye ne-SB110-SB150 ngensimbi eyakhiwe.
I-A2: Insimbi yensimbi (Ye-RV series motor worm gear, Usayizi 110-150, Okwe-motor motor ye-NCJ & F / R / S / K ye-helical gear)
Ama-Sogears brand Helical Worm motors nama-gear servo-motors. Ngokugcizelelwa kububanzi bokusebenza obuphansi, amayunithi egiya lesibungu ane-servo-motor ebalulekile, iba yisixazululo esilinganiswe kahle samadrayivu anezinjini ezi-angular. Ukusebenza kahle kungcono kakhulu kunalokho kwamagiya ezikelemu ezingumsulwa. Imininingwane eminingi injengokulandelayo: